Ndị na - ede blọgụ - Mmekọrịta Ọha
Saturday, July 13, 2013 Wenezde, August 13, 2014 Douglas Karr
Enwetara m email a site na ọkachamara mmekọrịta ọha na eze iji hụ ma m ga-ede blọgụ gbasara ndị ahịa ha na Martech Zone. Nke a bụ ozi email niile, ozi kọntaktị ya na akara ekwentị ya.
[Aha Onye Ahịa] na-agbasawanye azụmahịa na ọrụ mba ụwa site na inweta ndị na-eweta ọrụ mgbasa ozi nke dabeere na UK na-esote izu, na-ewusi nzọ ụkwụ ụwa ya ike ma rute ahịa ọhụrụ.
Site na nnweta a [Aha Onye Ahịa], nke amaara maka imepụta ahụmịhe ọtụtụ mgbasa ozi maka akara n'ụwa niile, ga-ebupụta n'ahịa ndị Europe iji wusie nkwado ndị ahịa mpaghara mpaghara na Europe, Middle East, Africa na India. Ugbu a na-akwado usoro mgbasa ozi ntụrụndụ na-echekwa na ntanetị, n'ịntanetị na ngwaọrụ na mba 70, [Client Name] na-enyere ndị ahịa aka dị ka Starbucks Coffee®.
Maka ozi ndị ọzọ, biko lee Mgbasa ozi Waya nke azụmahịa [Njikọ].
Ga-enwe mmasị ịde banyere ihe nnweta kachasị ọhụrụ [Aha Ndị Ahịa]?
Oge maka ezigbo onye ọrụ mmekọrịta ọha na eze:
Mbụ… teknụzụ SPAM megidere ihe omume CAN-SPAM. You're na-arịọ m ma ị nweghị usoro ịwepu aha na email gị (ebe ọ bụ na ị gbanwere ya dịka email nkeonwe). Enweghị m mmekọrịta ọ bụla gbasara gị, ma ọ bụkwanụ mụ na gị nwere mmekọrịta.
Enwere m enweghị echiche onye onye ahịa gị bụ ma ọ bụ ihe mere m ga-eji dee banyere ha. Naanị ide aha ha anaghị enye m nghọta banyere ụlọ ọrụ ha, ngwaahịa ha ma ọ bụ ọrụ ha.
Didn't gwaghị m onye ha na-azụ. Kedu onye na-eweta ọrụ? Gini mere o ji baara ndi na-ege m ntị nti?
Ezitela m njikọ iji chọọ ozi ndị ọzọ. Oge m bara uru. Gwa m ihe kpatara ozi a jiri bụrụ kpọmkwem metụtara blọgụ m na ndị na-ege ya ntị.
Gwa m ihe ichoro ka m dee ma dee ya maka ndi na ege m.
Gụnye onyonyo ma ọ bụ vidiyo nke nwere ike ịdabara na akụkọ ahụ ka m wee kesaa.
Nye njikọ ị chọrọ ka m kọọrọ ndị na - agụ akwụkwọ m ga - enye ha ozi ndị ọzọ.
Kwụsị ịdị umengwụ, ị nwere ike nweta nsonaazụ kacha mma. O doro anya na email gị bụ naanị egbutu na mado na ị na-ezigara ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-akpaghị aka. Kwụsị ya. Gụọ ihe ndị m biputere Etu esi ese ihe na onye na - eme ihe ike, Blogger ma ọ bụ onye nta akụkọ iji hụ ka esi eme ya!
Tags: ọjọọ pr pitchịde blọgụnwere ike-spamodeakụkọ pitchpitchprmmekọrịta ọhanezemmekọrịta ọha na ezemmekọrịta ọha na ezemmekọrịta ọha na eze jọgburu onwe ya
Feb 25, 2011 n’elekere 5:48 nke abali
O nyere m nsogbu mgbe ihe mbụ batara m n'obi bụ SPAM. Would ga-eche na ọ bụrụ na ịchọrọ ka mmadụ dee banyere gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị na ị ga-enye onye ahụ ọtụtụ ihe ọmụma dị mkpa iji nwee echiche nke ihe ụlọ ọrụ ahụ bụ. Dị ka nke a dị ka ozi ụdị ọ nwere ike zigara ọtụtụ ndị ọzọ ka a gwa ha otu ihe ahụ. Dị ka m kwuru na ọ mere m ọchị. Daalụ maka nke ahụ.
Aug 25, 2014 na 5:30 PM
Hahaha! Akwa! Daalụ maka ihe ncheta b / c Abụ m onye nchoputa na ọ bụghị ọkachamara ọkachamara marketer 🙂